Dalkii Carbeed Ee Ugu Horreeyay Oo Oggolaaday Kaniinka Kordhiya Dareenka Haweenka – somalilandtoday.com
Dalkii Carbeed Ee Ugu Horreeyay Oo Oggolaaday Kaniinka Kordhiya Dareenka Haweenka
(SLT-Qaahira)-Iyadoo dalka Masar uu noqonayo dalkii ugu horreyay ee Carab ah ee meelmariya soo saaridda iyo ka ganacsiga daawada kordhisa dareenka haweenka, ayaa weriyaha BBC-da Sally Nabil waxay u kuur gashay in dawadaasi ay suuq ka leedahay dalkaasi shacabkiisu dhaqanka ku dhagan yahay.
Leyla – ma aha magaceeda saxda ah – waa haweeney gurijoog ah oo ku jirta da`da soddomeeyada. Waxay doorbideysaa inay is qariso sida haween badan oo Masar ku nool oo kale, ka hadalka dhibaatooyinka galmada iyo baahida la xidhiidhaba weli wax aad looga xishoodo ayay ka tahay dalkaasi.
Leyla, oo aan qabin wax dhibaato caafimaad ah, ayaa soo iibsatay daawada iyadoo aanu dhakhtar u qorin – tan oo dhaqan caadi ah ka ah Masar, halkaas oo ay dadku iska soo iibsadaan daawada.
“Qofka farmashiyaha iibinayay wuxuu ii sheegay inaan kaniinka qaato habeen walba muddo dhowr toddobaad ah. Wuxuu ii sheegay in aanu wax dhibaato ah lahayn,” ayay tidhi Leyla. “Seygeyga iyo aniguba waxaan dooneynay inaan aragno waxa dhici doona. Hal mar baan isku dayay, dib dambana uma qaadan doono.”
“Daawadan aad baa halkan looga baahnaa – waa horumar,” ayuu yidhi Ashraf Al Maraghy oo wakiil ka ah shirkadda.
Farmashiiste aan la hadalnay ayaa ka digaya in kaniinka uu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga, wuxuuna qabaa inuu u daran yahay dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha iyo beerka la xidhiidha.
Balse shirkadda ayaa sheegtay inay qalad tahay in la adeegsado erayga “female Viagra” oo loola jeedo kaniinka kordhiya dareenka haweenka. “Warbaahinta ayaa magacaas la timid, annaga maaha,” ayuu yidhi Maraghy.
“Female Viagra’ waa eray marin-habaabin ah,” ayay tidhi Heba Qotb, oo ah dhakhtarad arrimahaasi ku takhasustay, waxayna diidday inay isticmaalka kaniinkaasi kula taliso bukaannadeeda.
“Waxba kama tarayo haweeney ay haysato dhibaato maskaxeed iyo mid jireedba,” ayay tidhi.
“Haweenku, wax walba maskaxdooda ayay la xidhiidhaan. Haweeneydu xidhiidh galmo oo caafimaad qaba lama wadaagi karto seygeeda haddii uu si xun ula dhaqmo. Wax daawo ah oo arrintaasi wax ka taraya ma jirto.”